Shiinaha warshad qiiqa sigaarka iyo soosaarayaasha | Senlai
1. Daboolka ilmahayagu wuxuu ku habboon yahay qaabka jidhka ilmaha. Dharka ayaa ah kuwo aan biyuhu xirin karin oo neefsan kara. Xagaa ma noqon doono wax cakiran xagaaga, laakiin way diiri kartaa xilliga qaboobaha. Daboolka ayaa ku duubi kara gacanta ilmaha jirkiisa hortiisa. Waxay si wax ku ool ah u xannibi kartaa cunnada inay ku dhacdo jirka.
2. Dharku wuxuu ka samaysan yahay maro caag ah oo aan biyuhu soo gaarin oo ka samaysan polyester fiber, kuwaas oo aan biyuhu xirin. Maraq khudradda khudradda bariiska ah waa boor, dhoobo iyo dufan. Dhammaantood waxaa joojiya qiijinta, si carruurtu aysan ugu baahnayn inay dharka iska beddelaan dhowr jeer maalintii, waana mid aad ugu habboon in la nadiifiyo.
3. Dharkeennu waa qaab mooddo moodal, midabbo kala duwan leh qaabna u kala duwan. Waxaa jira qaabab badan oo qiiqa carruurteenna, kuwaas oo loo qaybin karo qaabab kala duwan iyadoo loo eegayo astaamo kala duwan. Tusaale ahaan, marka loo eego dhererka gacmo-galka, waxaa loo qaybin karaa qaabka gacmo-dheer, qaabka gacmo-gaaban iyo qaabka gacmo-qabsiga. Qaabka gacmo dhaadheer ayaa ku habboon xilliga qaboobaha, qaabka gacmo-gaaban iyo qaabka gacmo-la’aanta ayaa aad ugu habboon xagaaga.
4. Marka loo eego naqshada jeebka bariiska, waxaa loo qaybin karaa jeebka bariiska hoose, jeebka bariiska dhexe, jeebka bariiska iyo jeebka bariiska ee la isku hagaajin karo. Naqshadda jeebka bariiska waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu hayo cunnada kala firidhsan marka ilmuhu wax cunayo.
5. Marka loo eego dhererka iyo qaabka qiijinta, waxaa loo qaybin karaa gaaban, dheer, goon dheer, dufan Sida ku xusan isku xirnaanta dhabarka, waxaa loo qaybin karaa lacagta Velcro, lacagta xarigga, jarjaridda saxaafadda.
Xiga: Bacda Hurdada
Wiil Cunug Sigaar Qaba
Qiiq Sariir Ilmo